Yandex | December 2019
Otu n'ime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu na Internet nke asụsụ Russian bụ nke mbụ na-agụnye ngwá ọrụ ndị dị mkpa iji sọọfụ egwu. Ọ bụrụ na ọrụ dị mkpa nke ihe nchọgharị weebụ na Yandex adịghị ezuru, ọ nwere ike 'ịmegharị' site na mgbatị, a ga-akọwa ụzọ ntinye ya na akụkọ nke anyị taa.
Otu esi emepụta mbinye aka na Yandex.mail
Enwere ike ịbanye na Yandex Mail iji dekọọ data achọrọ na leta ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ịkọrịta, njikọta na profaịlụ gị ma ọ bụ ihe ngosi nke ozi nkeonwe, nke e dekọrọ na ala nke akwụkwọ ozi ahụ. Ịmepụta aka mbinye aka Iji mepụta ya, ị ga-eme ihe ndị a: Mepee ntọala ozi ma họrọ "Data nkeonwe, mbinye aka, eserese".
Esi melite Adobe Flash Player na Yandex Nchọgharị
Adobe Flash Player bụ ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị a chọrọ maka iji ngwa ngwa. Na Yandex Browser, ọ na-arụ ọrụ ma nyefee ya na ndabara. A ghaghị imelite Flash Player n'oge ọ bụla ọ bụghị naanị iji rụọ ọrụ siri ike na ngwa ngwa, kamakwa maka ebumnuche nche. Dị ka ị maara, ụdị nsụgharị plug-ins na-abanye n'ime nje virus, na mmelite ahụ na-enyere aka ichebe kọmputa onye ọrụ.
Otu esi emezue obere akpa gi na Yandex Ego
Iji kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ, ọrụ, ma ọ bụ nyefe ego na Yandex Ego, ịkwesịrị ị jupụta akaụntụ kọmputa gị, ma ọ bụ, na okwu ndị ọzọ, obere akpa. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya iji mejupụta Yandex Wallet. Iji gaa na nchịkọta akụkọ, gaa na peeji nke Yandex Ego na isi aka nri ihuenyo, pịa bọtịnụ "Refill" (bọtịnụ a nwere ike igosipụta dị ka akara "+", dịka na nseta ihuenyo).
Otu esi ehicha Yandex Disk
Ebe nchekwa igwe na-enwetawanye ihe a na-ewu ewu dịka ngwá ọrụ nchekwa data, ọ bụkwa ihe ọzọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ntanetị ịntanetị. Otú ọ dị, dịka nchekwa data ọ bụla, nchekwa igwe ojii na-agbakwụnye faịlụ ndị na-enweghị isi, nke agafeghị agafe.
Mmekọrịta nke data na Yandex Disk
Maka mkparịta ụka nke kọmputa na mpaghara Yandex Disk igwe ojii nwere okwu "mmekọrịta". Ngwaọrụ arụnyere na kọmpụta na-arụ ọrụ nke ọma na ihe. Ka anyị lee ihe usoro a na ihe ọ bụ. Ụkpụrụ nke mmekọrịta bụ dị ka ndị a: mgbe ịrụ ọrụ na faịlụ (edetu, mbipụta ma ọ bụ ihichapụ) mgbanwe na-eme n'igwe ojii.
Otu esi wepu Yandex ozi niile gbasara onwe gi
Ọrụ Yandex na-ewu ewu na mpaghara Russia. A na-edebanye onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ na-anaghị arụ ọrụ n'ọrụ na usoro ihe a, nke pụtara na o nwere igbe akwụkwọ ozi na Yandex.Passport n'onwe ya na-echekwa ozi niile gbasara onwe ya: adreesị, nọmba ekwentị, wdg. banyere onwe gị site na Yandex.
Ntụle nchebe nke saịtị na WOT ndọtị maka Yandex Browser
Kwa ụbọchị ọnụ ọgụgụ saịtị na Ịntanetị na-amụba. Ma ọ bụghị ha nile nwere nchekwa maka onye ọrụ ahụ. O di nwute, onu ogugu ntaneti bu ihe ndi ozo, na ndi ozo nke na amaghi iwu nchedo, odi nkpa ichebe onwe ha. WOT (Web of Trust) bụ nyocha nchọgharị nke gosipụtara ókè ị nwere ike ịtụkwasị obi na otu saịtị.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Yandex Disk adịghị arụkọrịta
Ihe dị na nchekwa Yandex Disk na-agbakọ data na ihe nkesa ahụ site na mmekọrịta. Ya mere, ma ọ bụrụ na ọghị arụ ọrụ, mgbe ahụ, ọ pụtara na ị na-eji nsụgharị software nke ebe nchekwa ahụ efu. Ya mere, a ghaghị idozi ọnọdụ ahụ ozugbo enwere ike. Ihe kpatara nsogbu na mmekọrịta nke Disk na ngwọta ha Otu ụzọ isi dozie nsogbu ahụ ga-adabere n'ihe kpatara ya.
Mepụta akaụntụ na Yandex
Yandex bụ otu n'ime ọrụ Ịntanetị kachasị ukwuu, ijikọta ọtụtụ ọrụ maka nyocha na nhazi faịlụ, na-ege egwu, nyochaa ajụjụ ọchụchọ, na-akwụ ụgwọ na ihe ndị ọzọ. Iji jiri ọrụ niile nke Yandex rụọ ọrụ, ị ghaghị ịmepụta akaụntụ nke gị na ya, ma ọ bụ, na okwu ndị ọzọ, igbe ozi igbe.
Kedu ka esi agbanwe asụsụ n'asụsụ Yandex Browser?
Mgbe ị na wụnye Yandex.Browser, a na-ede asụsụ ya isi na otu ahụ nke edobere na sistemụ arụmọrụ gị. Ọ bụrụ na asụsụ nyocha ugbu a adịghị adabara gị, ma ịchọrọ ịgbanwere ya ọzọ, enwere ike ime nke a site na ntọala. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi gbanwee asụsụ na Yandex nchọgharị sitere na Russian na nke ị chọrọ.
Otu esi achọta faịlụ na Yandex Disk
Yandex Disk nwere search engine ngwa ngwa. Algorithm na-enye gị ohere ịchọọ faịlụ site na aha, ọdịnaya, ndọtị (usoro) na metadata. Chọọ aha na mgbatị Ị nwere ike chọọ na Yandex Disk site na ịkọ nanị aha, dịka ọmụmaatụ, "nkuzi Acronis" (na-enweghị ntụpọ). Nchọgharị Smart ga-achọta faịlụ na nchekwa niile nke nwere okwu data.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Yandex Browser akwụsịlata
Ọrụ siri ike ma kwụsie ike - ụkpụrụ bụ isi nke ihe nchọgharị weebụ ọ bụla. Yandex.Browser, na-arụ ọrụ na njirimara Blink engine, na-enye nlegharị anya na netwọk. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọsọ nke ịrụ ọrụ dị iche iche n'ime usoro ihe omume ahụ nwere ike ịda. Ọtụtụ mgbe otu ihe kpatara ndị ọrụ dị iche iche bụ ụta n'ihi nke a.
Etu ibudata na Yandex Disk
Ọrụ igwe ojii Yandex Disk na-ewu ewu na ọtụtụ n'ihi na ọ dị mma, ebe ọ na-enye gị ohere ịchekwa ozi ma chekwaa ya na ndị ọrụ ndị ọzọ. Nbudata faịlụ site na nchekwa a bụ usoro dị nnọọ mfe nke na-adịghị eweta ihe isi ike ọ bụla, Otú ọ dị, ndị na-amaghị ya nwere ike ịchọta ntụziaka ndị dị mkpa n'isiokwu a.
Mee ka olu dị na Yandex Disk
Site na ndabara, onye ọrụ ọ bụla Yandex Disk ọ bụla nyere 10 GB nke nchekwa nchekwa. Nke a ga-adị na nkwonkwo na-adịgide adịgide, ọ gaghị adịkwa ntakịrị. Ma ọbụna onye ọrụ kachasị ọrụ nwere ike ihu eziokwu ahụ na 10 GB agaghị ezuru maka mkpa ya.
Otu esi eji Yandex Disk
Yandex Disk bụ otu n'ime ọrụ igwe ojii kachasị ewu ewu na RuNet. Enwere ike ịchekwa faịlụ gị na ụgbọala, na mgbakwunye, software ọrụ na-enye gị ohere ịkekọrịta njikọ na ndị enyi na ndị ọrụ ibe gị ma mepụta ma dezie akwụkwọ. Ebe nrụọrụ anyị bụ nchịkọta isiokwu na Yandex Disk. N'ebe a, ị ga-ahụ ntụziaka zuru ezu maka ịrụ ọrụ ahụ.
Na bridges maka Yandex Browser: akwụkwọ nke ndekọ na "apụl" na VC
Dị ka ọtụtụ ndị maara, na microblog nke onye ọrụ ọ bụla nke netwọk mmekọrịta WKontakte akara ngosi nke sistemụ arụmọrụ mobile nke e bipụtara na post. O nwere ike ịbụ 3 akara ngosi: iOS, Android na Windows Phone. Enwere ike gosiputa nke ọ bụla n'ime ha ma ọ bụrụ na e mepụtara post ahụ site na ngwa ngwa.
Otu esi ejikọ Yandex Disk dịka netwọk netwọk
Dị ka ị maara, Yandex Disk na-echekwa faịlụ gị ọ bụghị naanị na sava ya, kamakwa na nchekwa pụrụ iche na PC. Nke a anaghị adị mfe mgbe niile, ebe ohere nke faịlụ nwere ike ịbụ nnukwu. Karịsịa maka ndị ọrụ ndị na-achọghị ịdebe nnukwu folda na diski usoro ha, nkwado maka teknụzụ WebDAV gụnyere na Yandex Disk.
Ịwụnye Flash Player na Yandex Nchọgharị
A chọrọ Flash Player si Adobe maka ihe nchọgharị ka ngwa ngwa wee rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Taa, anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere ịwụnye mgbakwunye a maka ihe nchọgharị weebụ Yandex Browser. Wụnye Adobe Flash Player na Yandex Nchọgharị. Ntọala a tụlere na arụ ọrụ na Yandex.
Ịmepụta njikọ iji budata faịlụ site na Yandex Disk
Otu n'ime uru nke iji Yandex Disk bụ ike ịkekọrịta faịlụ ma ọ bụ nchekwa na etinye na nchekwa gị. Ndị ọrụ ndị ọzọ ga-enwe ike ịzọpụta ha ozugbo na diski ha ma ọ bụ ibudata na kọmputa. Ụzọ maka ịmepụta njikọ na faịlụ Yandex Disk E nwere ọtụtụ ụzọ isi nweta njikọ na ọdịnaya ndị dị na mpaghara gị.